बगैँचाको लागि जग्गा अपुग भयो? घरको भित्तामै यसरी रोप्नुहोस् बिरूवाहरू
घर वरिपरीको वातावरण सुन्दर बनाउन हरियाली बगैँचा निर्माण गर्ने कसको पो रहर नहुँदो हो र? तर जग्गाको अभाव, त्यसमा सुनभन्दा महँगो सहरको जमिनको कारण बगैँचा सबैको रहरमै सीमित हुनसक्छ। तर अब तपाईको रहर, सोख र सपना जग्गाको अभावले रोक्नुपर्ने छैन। त्यसको लागि तपाईसँग इच्छा मात्र भए पुग्छ।
ह्याङगिङ बगैँचा बनाउनको लागि ठाउँको छनौट महत्वपूर्ण हुने देवकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार ताप, हावा तथा चिसो सिधै पर्ने ठाउँ उपयुक्त हुँदैन। हल्का छायाँ पर्ने बाल्कोनी छेउको भित्ता, झ्यालतिरको भागजस्ता ठाउँ उपयुक्त हुने उनले बताए।
घरको चारैतिर र मुख्य ढोकामा ह्यागिङ बास्केट घरको मुख्य ढोकाको दुबैतिर ह्यागिङ बास्केट राखेर बरण्डाको तीन तिरै ह्यागिङ बास्केट बगैँचा निर्माण गर्न सकिने देवकोटाको भनाइ छ।
त्यस्तै सेमी टेरेस, झ्याल र बालकोनीमा बास्केट राखेर फूल तथा विरुवा हुर्काउन सकिन्छ।
यस्तो बगैँचा निर्माण गर्दा जस्तो पायो त्यस्तै विरुवा तथा फूल रोप्दा झनै कुरुप हुनसक्ने देवकोटाको भनाइ छ। यसका लागि उपयुक्त विरुवाहरु रोप्नुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २२, २०७४, ०६:१८:३१